Ọkwa iwu - Laptọọpụ dị ọnụ ala
1 Onye nwe webụsaịtị
5.2 Mgbama Weebụ
5.3 Nke atọ
Onye nwe webụsaịtị
Laptọọpụ dị ọnụ ala (portable-baratos.net) bụ nke Portal network Blog akụkọ, nke ulo oru a AB Ntanetị Internetntanetị 2008 SL, CIF: B85537785, na adreesị na C / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Ikike ịjụ ọgwụgwọ: AB Internet Networks 2008 SL ga-akwụsị ịhazi data ahụ n'ụzọ ị gosipụtara, belụsọ maka ihe gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mmega ahụ ma ọ bụ ịgbachitere nkwupụta ndị enwere ike ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Weebụ na nnabata: Weebụsaịtị ahụ nwere ihe ezoro ezo SSL TLS v.1.2 nke na-enye ohere izipu nchekwa nke data nkeonwe site n'ụdị kọntaktị ọkọlọtọ, kwadoro na sava ahụ AB Internet Networks 2008 SL butere site na Occentus Networks.
Mpempe akwụkwọ ndebanye aha: AB Internet Networks 2008 SL na-eji ọrụ izipu ozi Sendgrid, Feedburner ma ọ bụ Mailchimp, nke na-echekwa data email gị, nnabata aha na nnabata. Nwere ike wepu aha na akwụkwọ ozi n'oge ọ bụla site na otu njikọ dị na ala nke mbupu ọ bụla ị nwetara
Nzube na nkwado ziri ezi: Ọgwụgwọ nke AB Internet Networks 2008 SL ga-arụ na data n'ime nke ọ bụla n'ime netwọkụ ekwuru n'elu ga-abụ, n'ọtụtụ, otu nke netwọkụ mmekọrịta na-enye ohere profaịlụ ụlọ ọrụ. Yabụ, AB Internet Networks 2008 SL ga-enwe ike ịkọwa, mgbe iwu anaghị egbochi ya, ndị na-eso ụzọ ya n'ụzọ ọ bụla na netwọkụ mmekọrịta na-enye ohere maka ọrụ ya, ngosi, onyinye, yana ịnye ọrụ ndị ahịa ahaziri iche.
Netwọk mmekọrịta. AB Internet Networks 2008 SL na-eji netwọkụ mmekọrịta America nke YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard bụ ndị a na-enyefe data mba ofesi, nke nyocha na teknụzụ n'ihe metụtara weebụsaịtị ahụ nọ na sava ya na na AB Internet Networks 2008 SL na-emeso data nke, site na ha, ndị ọrụ, ndị debanyere aha ma ọ bụ ndị na-agagharị agagharị na-enyefe ụlọ ọrụ AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ kekọrịta ya.
Ndị na-akwụ ụgwọ. Ka i wee nwee ike kwụọ ụgwọ ya PayPal o straipu, AB Internet Netwọk 2008 SL ga-eziga data dị mkpa nke ndị ahụ na ndị na-arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ a maka ịnye arịrịọ ịkwụ ụgwọ kwekọrọ.
N'iji weebụsaịtị a, onye ọrụ kwenyere na ọ gaghị eme omume ọ bụla nke nwere ike imebi ihe oyiyi, ọdịmma na ikike nke AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere ike imebi, gbanyụọ ma ọ bụ bufee ọnụ ụzọ ahụ ma ọ bụ gbochie, n'ọnọdụ ọ bụla , iji weebụ eme ihe.
Enwekwara kuki ndị kwekọrọ na netwọk mmekọrịta nke ebe nrụọrụ weebụ a nwere usoro kuki nke ha.
Enweghi ike ịtụle ọdịnaya nke isiokwu ndị edepụtara na saịtị ahụ, agbanyeghị, dochie anya ndụmọdụ gbasara iwu.
Site na Ọnọdụ Ndị a, enweghị ikike ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike ụlọ ọrụ na Portal ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị mejupụtara ya, mmeputakwa, mgbanwe, nkesa, nkwukọrịta ọha na eze, na-enye ndị mmadụ ohere, iwepụta, jiri ya, na-amachibidoro ya iwu ebugharị ma ọ bụ ojiji nke ụdị ọ bụla, n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ usoro, nke ọ bụla n'ime ha, belụsọ n'okwu ndị enyere ya ma ọ bụ nye ya ikike nke iwu metụtara ya.
Onye ọrụ ahụ maara ma nabata na ebe nrụọrụ weebụ niile, nke nwere enweghị njirimara zuru oke ederede, onyonyo, atụmatụ, ngwanrọ, ọdịnaya (gụnyere usoro, nhọrọ, ndokwa na ngosi nke otu), ihe ọdịyo na eserese, ejiri ụghalaahịa, ikike nwebisiinka na ikike ndị ọzọ edenyere aha ha, dịka nkwekọrịta mba ụwa nke Spain nọ na ya na ikike ndị ọzọ nwere ikike na iwu nke Spain.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ma ọ bụ onye nke atọ ewere na mmebi iwu ikike ikike ọgụgụ isi ha ziri ezi n'ihi iwebata ụfọdụ ọdịnaya na saịtị ahụ, ha ga-agwa AB Internet Networks 2008 SL nke ọnọdụ a kwuru, na-egosi:
Ọnọdụ ojiji nke saịtị a ugbu a na-achịkwa nke ọ bụla nke oke ya site na iwu Spanish. Asụsụ ederede na nkọwa nke ọkwa iwu a bụ Spanish. Agaghị etinye akwụkwọ ọkwa iwu a n'otu n'otu maka onye ọrụ ọ bụla mana ọ ga-anọgide na-enweta ya site na Internetntanetị na weebụ.
Ndị ọrụ nwere ọnọdụ nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ dị ka ụkpụrụ Spanish si kọwaa ma biri na European Union, ọ bụrụ na ha nwere nsogbu na ịzụrụ ihe n'ịntanetị mere na AB Internet Networks 2008 SL, iji nwaa iru nkwekọrịta ụlọ-ikpe nwere ike gaa Ihe Mkpebi Mkpebi Ntanetị n'ịntanetị, nke European Union mepụtara ma mepụtara ya na European Commission n'okpuru Iwu (EU) 524/2013.
Thenweta na / ma ọ bụ iji nke a nye onye ọ bụla nke mere ọnọdụ Onye ọrụ, ịnakwere, site n'oge a, n'ụzọ zuru oke na enweghị ndoputa ọ bụla, ọkwa iwu a, yana ọnọdụ ụfọdụ nke, ebe o kwesịrị ekwesị, mejupụta ya, na mmekọrịta ụfọdụ ọrụ na ọdịnaya nke ọnụ ụzọ ahụ.
A gwara onye ọrụ ahụ, ma nabata ya, na ịnweta weebụsaịtị a apụtaghị, n'ụzọ ọ bụla, mmalite nke mmekọrịta azụmahịa na AB Internet Networks 2008 SL. N'ụzọ dị otú a, onye ọrụ ahụ kwenyere iji weebụsaịtị, ọrụ ya na ọdịnaya ya n'emebighị iwu dị ugbu a, ezi okwukwe na usoro ọha na eze. Ojiji nke weebụsaịtị maka ebumnuche na-ezighi ezi ma ọ bụ na-emerụ ahụ, ma ọ bụ nke ahụ, n'ụzọ ọ bụla, nwere ike ịkpata mmebi ma ọ bụ gbochie arụmọrụ nkịtị nke weebụsaịtị ahụ amachibidoro. Banyere ọdịnaya nke weebụsaịtị a, amachibidoro ya:
Can nwere ike igosipụta, gbasara data anakọtara, ikike a ghọtara na Iwu Organic 15/1999, nke nnweta, ndozi ma ọ bụ kagbuo data na mmegide. N'ihi nke a, ana m agwa gị na ị nwere ike igosi ikike ndị a site na ederede na mbinye aka nke ị nwere ike izipu, yana foto nke NJ gị ma ọ bụ akwụkwọ njirimara njirimara, na adreesị nzi ozi nke AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ site na email , tinye foto nke ID iji: kọntaktị (na) actualityblog (dot) com. Tupu ụbọchị iri, anyị ga-aza arịrịọ gị iji kwado mmezu nke ikike ị rịọrọ ịme.
N'ikwekọ na iwu dị ugbu a, AB Internet Networks 2008 SL anaghị arụ ọrụ SPAM, yabụ ọ naghị eziga ozi ịntanetị azụmahịa nke onye ọrụ na-arịọbeghị ma ọ bụ nye ikike. N'ihi ya, n'ụdị ọ bụla dị na weebụ, Onye ọrụ nwere ohere ịnye nkwenye doro anya ha ịnata Akwụkwọ Akụkọ / ngbasa ozi, n'agbanyeghị ozi azụmahịa achọrọ ka a kpọọ.